Gaby Vakiniadiana “Tsy azo ahitsy ny lalàna fototra.”
Tarika MAGE 4 Hiangaly ny hiran-dry Bon Jovi, The Police ary Metallica
Hiaka-tsehatra etsy amin’ny Dome RTA Ankorondrano ny tarika Mage 4 amin’ny zoma 21 desambra ho avy izao, izay ankatoky ny fankalazana ny fetin’ny Noely.
Hoby Rasolofoarimasy Hamoaka ny amboaran-tononkalo “Vikina”
Mitombo isa ireo mpanoratra Malagasy vao erotrerony. Iray amin’ireo manomboka mametraka ny dian-tanany i Hoby Rasolofoarimasy, izay hamoaka ny sangan’asany voalohany dia ny boky amboaran-tononkalo “Vikina”,
Mpilatsaka an-tsitrapo Malagasy Tanora avokoa ny 39 %
Mitana anjara toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fisian’ireo mpilatsaka an-tsitrapo, raha araka ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny serasera sy ny fifandraisan-davitra Atoa Guy Laurent Ramanakamonjy.
Matsubara sy ny tariny Hampahafantatra ny « Kay keny sound »
Nangingina tao ho ao ny mpanakanto Matsubara sy ny tariny. Nilaza ary ity mpihira manana ny lazany ity fa misy hatrany tokoa ny fandaharam-potoana isan-karazan’izy ireo saingy noho ny raharaham-pirenena dia naleo aloha nampandeferina ny ankamaroany.
Literatiora aty amin’ny ranomasimbe indianina Sangany ny Malagasy
Isan-taona dia misy hatrany ny fifaninanana manoratra Angano, tononkalo, tantara foronina, sombin-tantara eto amin’ny faritry ny ranomasimbe indianina.
Festival interfilm andiany faha-34 Voafantina hianatra ao Berlin i Koloina RFamenontsoaakotoarisoa
Voafantina hianatra ao amin’ny sekoly lehibe “ art-on-the-run filmschool” ao Berlin i Koloina Famenontsoa Rakotoarisoa, tanora Malagasy mpilalao sarimihetsika nandray anjara tamin’ilay festival interfilm andiany faha-34 notanterahina tany Berlin ny 20 ka hatramin’ny 25 novambra lasa teo.
Anisan’ireo elatra mbola mijoro ho mpanohitra izao fitondrana mijoro izao ny antoko Vahoaka MIray ( VAMI). Naneho ny heviny mikasika ny fihetsiky ny filoham-pirenena tato ho ato ny sekretera jeneraliny, Gaby Vakiniadiana. Ny tafany tamin’ny gazety Tia tanindrazana.
Tia tanindrazana (TT) : Maro ireo fihetsiky ny filoham-pirenena tato ho ato araka ny filazan’ireo mpankasitraka azy. Ny hevitrao ?
Gaby Vakiniadiana (GV) : Ny Vahoaka MIray dia anisan’ny nitaky ny fanovana lalàmpanorenana. Tsy fanovana anefa ilay kasaina hatao fa fanitsiana. Aminay, na manova na miala no takianay amin’ny filoham-pirenena. Io lalàmpanorenana io no nahalany azy. Nitondra izy tamin’ny tetezamita ka maninona raha tamin’izany no nahitsy ny lalàmpanorenana ? Ny lalàna fototra aminay tsy azo ahitsy fa io mila fidirana amina tetezamita iraisan’ny rehetra mihitsy dia manolotra karazana volavolan-dalàna mety na rafitra federalisma na repoblikanina na demokraty. Mikasika ny resaka fanovana governemanta dia niaraha-nahita fa ny efa tonta ihany no navadibadika. Aminay, ny vahoaka fotsiny no nofitapitahan’ny mpitondra satria tetika hitazonana toerana no misy. Matoa tsy tonga ilay 10 miliara dolara dia tsy matoky ny mpitondra antsika ny mpamatsy vola. Mikasika ilay fandraisana ny mpanao gazety teny Iavoloha ny sabotsy teo dia mbola averiko ihany, maninona no rehefa akaiky ny fotoana vao mody mampiantso ? Ny antony dia ilaina amin’ny taona 2018 ny mpanao gazety. Izahay eto dia manipaka tanteraka ny kolikoly.
TT : Inona no tena tsy nahafa-po anareo ?
GV : Na lalàmpanorenana na sosialim-bahoaka na fandriampahalemana … dia tsy nahafa-po anay. Ny fanafodiny dia miala ny filoha. Efa ny zo fototra toy ny misakafo in-telo isan’andro mihitsy no tsy voahaja intsony. Feno Antanimora satria mahantra ny firenena. Lasan’ny Sinoa ny tany. Izany rehetra izany dia mampiseho fa tsy mahavita azy ny mpitondra. Mangataka izahay mba horarana tsy hivoaka ny tanin’ny repoblikan’i Madagasikara izay mpitondra mahavita ny taom-piasany fa hotsaraina eto ary hatsangana haingana ilay fitsarana manokana na HCJ.
TT : Tsy hamboly krizy vaovao indray ve izany tetezamita izany ?
GV : Ny krizy dia mbola misy hatreto. Ny mpitondra no mety afaka tamin’izany fa tsy ny vahoaka. Sao dia mila arodana mihitsy ny trano izay mibilabila hananganana fototra hanaovana trano vaovao ?
TT : Ny hafatrao farany ?
GV : Ny vahaolana fohy ezaka dia ny fananganana tetezamita iaraha-mitantana ao anaty firahalahiana. Tsy ho fitadiavan-tseza fa fitsinjovana ny taranaka faramandimby. Tsy ny fanomezana tany ho an’ny Karana sy Sinoa no vahaolana fa fanomezana asa ho an’ny vahoaka. Hatramin’izay, nisy ny lalàna hoe mahazo tany ny olona manambady fa tsy nomena. Vokany, ety an-drenivohitra ny olona no mandehandeha. Ny sasany matory an’arabe. Mba hanafoanana izany dia aleo mihitsy miaina lalàmpanorenana vaovao.
Nangonin’i J. Mirija